Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » FAA waxay soo saartay digniin cusub oo Boeing 737 MAX ah
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Diyaaradaha ay saamaysay ayaa looga shakisan yahay in ay ku guuldaraysteen koontaroolka socodka elektaroonigga ah ee baakadaha hawo qaboojiyaha kuwaas oo hawo ka soo dajiya xamuulka meelaha kale ee diyaaradda.
Digniin ayaa laga soo saaray arrinta xakamaynta dabka ee Boeing 737 MAX.
Diyaaradaha Boeing 737 MAX iyo qaar ka mid ah moodooyinka kale ee 737 ayaa saameeyay dardaaranka badbaadada.
Amarku wuxuu saameeyaa ilaa 2,204 diyaaradood oo adduunka ah.
Dhibaatooyinka kaliya uma muuqdaan inay ku dhammaanayaan Boeing 737 MAX oo dhib badan. Halka Maraykanka Maamulka Duulista Hawada Federaalka (FAA) dib u rogay amarkii asalka ahaa ee dhulka oo dhan ku salaysnaa Boeing 737 MAX diyaaradood bishii Nofembar, in ka badan 100 ka mid ah diyaaradihii u muuqday inkaar ayaa mar kale la joojiyay bishii Abriil arrimo la xiriira nidaamka korontada. Boeing -ka cusub ee noociisu ahaa 737 MAX 10, ayaa markii ugu horraysay duushay bishii Juun waxaana la filayaa inuu adeegga galo 2023 -ka.
Laakiin amar cusub, oo maanta la soo saaray, FAA waxay xaddiday awoodda Boeing 737 Max & NG ee awoodda duullimaadyada guban kara, iyada oo xustay in diyaaraduhu ay leeyihiin cilad xagga xakamaynta socodka hawada ah ee gelitaanka iyo ka bixidda xamuulka.
Diyaaradaha Boeing 737 Max iyo qaar ka mid ah moodooyinka kale ee 737 ayaa saameeya dardaaranka badbaadada, kaas oo u baahan hawlwadeennada inay hubiyaan in dhammaan alaabta ku jirta xamuulka ay yihiin kuwo aan guban karin oo aan guban karin. Diyaaradaha ay saamaysay ayaa la tuhunsan yahay inay leeyihiin “xakamaynta socodka korantada ee korontada ee baakadaha hawo qaboojiyaha ee hawada ka soo dejiya xamuulka meelaha kale ee diyaaradda,” sida ay sheegtay FAA.
Amarku wuxuu saameeyaa qaar ka mid ah 2,204 diyaaradood oo caalamka ah, 663 ka mid ah ayaa ka diiwaangashan Maraykanka. Diyaaradda Boeing oo nooceedu ahaa 737 Max ayaa si weyn loo joojiyay tan iyo bishii Maarso 2019 kadib markii laba shil oo halis ah oo ay ku dhinteen dhammaan 346 -kii qof ee saarnaa ay muujiyeen dhibaato xagga nidaamka kombiyuutarka. Baadhitaan dheeraad ah ayaa kaliya soo saaray arrimo badan oo badbaado, mana aha kaliya nooca 737.
Boeing 777s iyo 787s ayaa sidoo kale la baaray cilladaha badbaadada. Shirkadda lafteeda ayaa ku boorrisay shirkadaha diyaaradaha inay joojiyaan duulimaadyada qaar ka mid ah 777 nooc bishii Febraayo ka dib markii matoorro badan ay ku qarxeen hawada dhexdeeda, isla bishaas, FAA waxay dalbatay in la baaro 222 Boeing 787s oo ku saabsan walaaca laga qabo guddiyada burburka. Walaacyada wax-soo-saarka ee ku saabsan “burburka walxaha shisheeye” ee ku haray diyaarado cusub ayaa keenay baaxadda-weyn ee baaritaan dheeraad ah.